Izimpawu teething ingane
Izimpawu teething ingane akanayo inqubo eyamiswa ngokucacile. A izinyane uthola izinyo kuqala sekwephuzile lapho umama ozwa tinkling we spoon ngesikhathi feedings. Ukuze omunye inzalo ngaphambi luhamba eside futhi egcwele ubuhlungu ubude besikhathi.
Izimpawu teething ingane zifana izimpawu of imikhuhlane - izinga lokushisa likhuphuka, kuba ukuminyana kungenzeka amavesi acinene, njll Ngakho, Mama idinga ukwazi kubo, okuzokwenza ekuqedeni ukuhlupheka kwalaba imvuthuluka .. Nokho, lapho ingane kutholakala nesimo okungenamsoco, kuyinto efiselekayo ukukhombisa wezingane zakhe.
Izimpawu eyinhloko teething ingane
Izimpawu teething ngamazinyo zezingane kungaba eziningana. Lokho kungenzeka ukunquma ukuthi umntwana ayikwazi enginakho ukuqunjelwa, noma Ari. Kuyadingeka ukuba sibaphathe ngokucophelela futhi ngendlela efanele.
Okokuqala, kubalulekile ukucasuka. Nokho, le ndlela yokuziphatha kuyaqondakala, ngoba kwamazinyo kuthoma yaqhuma okusho ubuhlungu obukhulu ngoba ithenda izinsini. Lokhu kunjalo ikakhulukazi nobuntu izinyo kuqala futhi ngesikhathi molars teething. Abazali kufanele banikeze nesondlo. Sivame ukuthatha wamgona, kakhulu nokhathalelayo. Umzamo ukuphazamisa ingane kusukela ubuhlungu abanye ibhizinisi elithakazelisayo noma umcimbi. Kuyadingeka ukuba sizame ukushweleza izifiso ingane futhi akusho linqume iyiphi enemibandela noma izinguquko okungazelelwe schedule.
Teething ezinsaneni, ngokuvamile uhambisana amathe anda. Ngokusho lokhu uphawu cishe njalo kucace ukuthi umntwana teething. Kule ukukhwehlela. Kodwa ngaphandle likhuphuka izinga lokushisa, isizathu ezibaluleke ngempela. Lapho amathe kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi abantwana kwesilevu wawusomile. Uma umswakama kufanele usule umlomo wakhe isilonda ngendwangu ehlanzekile. Uma kungenjalo, kungenzeka ukuqubuka naseduzane komlomo.
Ngesikhathi sigaba yengane teething uqondisa konke emlonyeni wakhe. Anakho ukwakheka isifiso nongalawuleki nje into ukuhlafuna noma ukuluma. umama Ibele kufanele uqaphele futhi icocekile indawo esizungezile. Uma ingane iqala ukuluma, kubalulekile ukuzama ukuyichazela ukuthi lokhu akufanele kwenziwe. Ngeke kube engadingekile ukuthenga amathuluzi akhethekile ukuthi ingane ngeke ukuhlafuna ku ngaphandle kokudala ukuzilimaza. Ngokwesibonelo, kungase kube indandatho, lelo okuthi lapho selehlile, ukunciphisa isikhathi ehlushwa ingane nezinsini yakhe.
Izimpawu teething kungaba ngempela edukisayo. Ngokwesibonelo, uma ingane iqala usiphule ezindlebeni futhi ngamandla bezihlikihla izihlathi, umama kufanele uqaphele. Ngaphezu izimpawu teething, lokhu kungase kubonise ngegciwane indlebe waqala. Kumele uxhumane nodokotela wakho ngokushesha. Lokhu kusebenza futhi ikakhulukazi ezimweni lapho izinga eliphansi lokushisa komzimba wengane wasukuma ukuze 37.5 degrees. Ngo ukuziphatha yokwenziwa wengane kanye ukwandisa ukucasuka yakhe yokubusa iyona engcono ukuba afune usizo lwezokwelapha.
Lapho teething, ingane ingase ibe uhudo noma indle okuxekethile. Kulokhu, odokotela abaningi bayangabaza leli qiniso. Kodwa izifundo lososayensi Australian isikuqinisekisile ukuthi amathe ngokweqile eziphumulele esihlalweni ngenkathi teething. Futhi lokhu kuholela sohudo.
Ebusuku, namazinyo abayeki ezikhulayo. Kule ingane iphupho iba ukukhathazeka futhi libukhali. Ukucasuka umntwana kusukela kule asikapheli. Ngakho-ke kubalulekile ukumlungiselela ukugeza ngezinsalela amakhambi. Lokhu kuyokwenza ukunqanda ingane. Kodwa ngaphambi isenzo esinjalo Khuluma nodokotela wakho.
Hhayi ngaso sonke isikhathi izimpawu of teething ingane inkulumo mayelana ekuqaleni kwalesi isigaba yentuthuko nokukhula. Ngaphansi kwazo kungase ukufihla ezihlukahlukene ezinye izifo. Ngakho yini okufanele ukugxila isimo somntwana. Futhi uma noma yimuphi ngeziphambeko ngokushesha uxhumane nodokotela wakho.
"Dentin-unama '- indlela ukwakha uphawu yesikhashana
Nomtholampilo wamazinyo Petersburg
Izimbangela izimpawu gingivitis kanye nokwelashwa kwayo
Plazmolifting amazinyo: ngezibuyekezo nezithombe
Styx, neminye umzimba ukugoqa: incazelo inqubo, ukusebenza kahle, kanye nokubuyekeza
Yenza i-Windows. Ikhodi yephutha 0x8007007b: indlela yokulungisa?
Drops "Dantinorm Baby": imiyalelo nokubonakaliswa ukusetshenziswa
Interview - yobuciko wesimanje ngaphakathi abezindaba
Yini ehlukanisa ukhuni elalivela esihlahleni? Sithola impendulo yalo mbuzo
I-slab slab. Imikhiqizo ekhonjiwe ekhonkolo
Shaverma ekhaya, noma njengendlela esheshayo neshibhile ukondla isixuku izivakashi